Uphenyo lwesikhala sikaJuno lusikhombisa ubuhle bezingodo zikaJupiter | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IZITHOMBE: Uphenyo lwesikhala sakwaJuno lusikhombisa ubuhle bezigxobo zakwaJupiter
Izigxobo ezimbili zeJupiter ezithathwe ngophenyo »Juno».
Ngokokuqala ngqa emlandweni wesintu, sikwazi ukubona egumbini lokuphumula lezindlu zethu izingongolo zeJupiter, iplanethi enegesi etholakala ebangeni elicishe lifane, hhayi ngaphezulu noma ngaphansi, kumakhilomitha ayizigidi ezingama-588. Futhi konke ngenxa yeNASA, futhi ikakhulukazi kuphenyo lwendawo yayo »uJuno».
Ezithombeni azithathile ungabona inhlupho yangempela yezivunguvungu ezimise okweqanda eziphatha nokuziphatha okungakaze kubonwe kuze kube manje kunoma iyiphi enye iplanethi kuSolar System. ENyakatho yeNyakatho sekutholakele iziphepho ezinkulu, ezingamakhilomitha ayi-1.400 XNUMX ububanzi.
Isithombe - uCraig Sparks
Yize kungekho kuphela izivunguvungu ezihlaba umxhwele, kodwa babonile nefayela le- ifu elinganiselwa ebangeni elingamakhilomitha angama-7.000 ubukhulu elingaphezulu kakhulu kokunye okuseNorth Pole. Okwamanje, akwaziwa ukuthi lezi zinto ezimangalisayo zingakhiwa kanjani; Kodwa-ke, lapho kutadishwa idatha emazingeni okushisa ezingqimbeni zangaphakathi zomkhathi kube nokwenzeka ukuthola ukuthi Amanani amakhulu e-ammonia avela ezindaweni ezijulile afaka isandla ekwakhiweni kwawo.
Uphenyo lwesikhala »Juno» ube ngowokuqala ukwazi ukubona ukugeza kwama-electron awela emkhathini, okudala izibani ezisenyakatho zeplanethi enamandla kakhulu. Eminyakeni eyishumi eyedlule uphenyo lweNASA Pioneer 11 lwadlula amakhilomitha angama-43.000 ngaphezu kwamafu, kepha "uJuno" usondele kakhulukazi, ngakho ososayensi abakutholanga kunzima ukukala ukuqina kwamandla kazibuthe. Umphumela ube 7.766 gauss, kabili lokho okubaliwe kuze kube manje. Ukuthola umbono wokuthi kwenzekani kwiplanethi enegesi, kufanele sazi ukuthi ukuqina kwamandla kazibuthe womhlaba kungu-100 gauss, okucishe kufane nokuheha kukazibuthe othambekele kuma-degree ayi-11 maqondana ne-eksisi. ukujikeleza komhlaba.
Isiphepho eplanethi iJupiter. Isithombe - NASA
ISouth Pole kaJupiter, ethathwe ngu »Juno». Isithombe - NASA
"UJuno", ubukhulu benkantolo ye-basketball, yi-spaceship leyo sebenzisa amandla elanga kuphela ibanjwe ngamapaneli amakhulu. Amakhamera nayo yonke imishini yesayensi ivikelwe nge-titanium ukuze zivikeleke kahle emisebeni ekhishwa yiJupiter. Kepha kuhlelwe "ukuzibulala" kwakhe: kuzoba ngoFebhuwari 20, 2018, lapho ezongena ezingxenyeni ezingaphandle zomkhathi ukuthola ukuthi ngabe kukhona yini umgogodla onamadwala njengoba sekukholwe isikhathi eside. Uma kunjalo, futhi njengoba iJupiter kwakuyiplanethi yokuqala ukwakhiwa, ingacacisela ososayensi ukuthi yiziphi izinhlobo zezinto zokwakha ezazikhona ohlelweni lokuqala lwelanga.
Uma ufuna ukubona izithombe eziningi, chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izithombe » IZITHOMBE: Uphenyo lwesikhala sakwaJuno lusikhombisa ubuhle bezigxobo zakwaJupiter
IVanuatu, isifunda somhlaba esisengozini enkulu ekushintsheni kwesimo sezulu